Radio Don Bosco - Afo mivaivaim-pitiavana
Io Fo voatrobaka io dia miantso sy manasa antsika hibebaka. Anjarantsika ny miondana eo amin'ny tratran'i Jesoa toa ny nataon'i Masindahy Joany apôstôly. Rehefa vonto ny fitiavany isika dia afaka manohy indray amim-pinoana ny làlan'ny fibebahana. Làlana mitozo amin'ny fizàrana ny tamba-java-iainana anaty : fandosirana ny resabe sy ireo teny lava tsy ilaina, tsy sanatria finiavana ny ho hentitra amin'ny tena fotsiny, na faniriana ny ho maona, fa mba handraisana ny fahazarana monina ao amin'ny tena, fahazarana mijery ny atin'ny fon'ny tena ka hizotra miandalana ho naman'ny fanginana, sakaizan'ny vavaka.
Tsy maintsy miroso lavidavitra kokoa anefa isika. Andeha àry ianarantsika ny hitombo ao amin'ny fitiavana. Andeha hirotsaka ao amin'ny sekolin'i Jesoa, Ilay malemy fanahy sy manetry tena ao am-po. Rehefa manaiky ny hiombona amin'i Jesoa isika dia hiova ho fo nofo ny fo vatontsika. Atsipazo ao amin'io afo mivaivaim-pitiavana io ny fontsika mba voadio tanteraka.